Her Private Life (2019) Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Original name그녀의 사생활
StarringAhn Bo-hyun, Hong Seo-young, Im Ji-gyu, Jung Won-chang, Kim Bo-ra, Kim Jae-wook, Kim Mi-Kyeong, Kim Sun-young, Lee Il-hwa, Maeng Sang-hun, One, Park Jin-joo, Park Min-young, Park Myung-shin, Seo Ye-Hwa
Synopsis of Her Private Life (2019) Complete
Sung Deok-Mi (Park Min Young)ကအနုပညာပွခနျးတဈခုရဲ့ ပွတိုကျမှူး တဈယောကျဖွဈသလို အဆိုတျောအဖှဲ့ဝငျလေးဖွဈတဲ့ Shi-An ကိုလညျး အရူးအမူးစှဲလမျးနှဈသကျနတေဲ့ ပရိတျသတျတဈယောကျပါတဲ့။ ဘယျလောကျထိလဲဆိုရငျ fan website တဈခုတောငျထောငျထားပါသတဲ့။ Shi An အပျေါသူမရဲ့စှဲလမျးမှုကွောငျ့ ပွတျစဲရပျဆိုငျးလိုကျရတဲ့ လူမှုရေးတှအေမြားကွီးရှိခဲ့ပါသတဲ့။ Sung Deok-Mi ကခုလကျရှိမှာတော့ အလုပျအပျေါအာရုံစိုကျရငျး Shi Ah ရဲ့ fangirl အဖွဈလညျး တဈဖကျတဈလမျးကနေ သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျဘဝကိုဖွတျသနျးနပေါတယျ။
တဈရကျမှာ.. Sung Deok Mi အလုပျလုပျနတေဲ့အနုပညာပွခနျးကို ပွခနျးဒါရိုကျတာ အသဈတဈယောကျပွောငျးလာခဲ့ပါတယျ။ သူကတော့.. Ryan Gold (Kim Jae-Wook) ပါ။ အရငျကနာမညျကြျောကွားခဲ့တဲ့ပနျးခြီဆရာတဈယောကျဖွဈခဲ့ပွီး လကျရှိမှာတော့ ပနျးခြီဆှဲခွငျးအလုပျရပျဆိုငျးထားတဲ့သူပါ။ Ryan ရဲ့ကာရိုကျတာက တခွားသူတှအေပျေါ အလေးထားစိတျဝငျစားလမေ့ရှိတတျတဲ့သူ (အခစြေိနျ ) ပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့လညျး ဘယျလိုဆိုဆို Sung Deok Mi က Shi-Anရဲ့အမာခံပရိတျသတျတဈယောကျဖွဈပွီး website တဈခုတောငျပွုလုပျထားတယျဆိုတာသိလိုကျရတဲ့အခါ… Ryanတဈယောကျအခစြေိနျကနေ စပျစုစိနျဖွဈလာခဲ့ပါတယျတဲ့။
Nam Eun Ki (Ahn Bo-hyun) ကတော့ ဂြူဒိုကစားသမားတဈယောကျပါ။ Sung Deok-Mi ရဲ့ငယျသူငယျခငျြး ဖွဈသလိုသူမကိုတဈဖကျသတျခဈြနရေသူပါတဲ့။
Cha Shi-an (One) ကတော့ “White Ocean” ဆိုတဲ့ အဆိုတျောအဖှဲ့တဈခုရဲ့ အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျပါ။ သူ့ရဲ့ပါရမီနဲ့အတူ ခြောမောတဲ့ရုပျရညျ ကွောငျ့ အဖှဲ့သားတှအေကွားမှာ ရေးပနျးအစားဆုံး ဖွဈသလို Sung Duk-mi အပါအဝငျမြားစှာသော အမာခံပရိတျသတျ တှပေိုငျဆိုငျထားတဲ့ idol တဈယောကျပါ။
idol ကို သဲသဲလှုပျခဈြတဲ့ မမရယျ မမကိုမှစိတျဝငျစားမိသှားတဲ့ အခစြေိနျကိုကို ရယျ တို့ကွားမှာ.. ဘယျလိုဘယျလိုတှမြေားဖွဈလာမလဲ ?
Sung Deok-Mi (Park Min Young)ကအနုပညာပြခန်းတစ်ခုရဲ့ ပြတိုက်မှူး တစ်ယောက်ဖြစ်သလို အဆိုတော်အဖွဲ့ဝင်လေးဖြစ်တဲ့ Shi-An ကိုလည်း အရူးအမူးစွဲလမ်းနှစ်သက်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါတဲ့။ ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် fan website တစ်ခုတောင်ထောင်ထားပါသတဲ့။ Shi An အပေါ်သူမရဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့် ပြတ်စဲရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ လူမှုရေးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါသတဲ့။ Sung Deok-Mi ကခုလက်ရှိမှာတော့ အလုပ်အပေါ်အာရုံစိုက်ရင်း Shi Ah ရဲ့ fangirl အဖြစ်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်။
တစ်ရက်မှာ.. Sung Deok Mi အလုပ်လုပ်နေတဲ့အနုပညာပြခန်းကို ပြခန်းဒါရိုက်တာ အသစ်တစ်ယောက်ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့.. Ryan Gold (Kim Jae-Wook) ပါ။ အရင်ကနာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ပန်းချီဆွဲခြင်းအလုပ်ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့သူပါ။ Ryan ရဲ့ကာရိုက်တာက တခြားသူတွေအပေါ် အလေးထားစိတ်ဝင်စားလေ့မရှိတတ်တဲ့သူ (အချေစိန် ) ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်လိုဆိုဆို Sung Deok Mi က Shi-Anရဲ့အမာခံပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး website တစ်ခုတောင်ပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါ… Ryanတစ်ယောက်အချေစိန်ကနေ စပ်စုစိန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့။
Cha Shi-an (One) ကတော့ “White Ocean” ဆိုတဲ့ အဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ပါရမီနဲ့အတူ ချောမောတဲ့ရုပ်ရည် ကြောင့် အဖွဲ့သားတွေအကြားမှာ ရေးပန်းအစားဆုံး ဖြစ်သလို Sung Duk-mi အပါအဝင်များစွာသော အမာခံပရိတ်သတ် တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ idol တစ်ယောက်ပါ။
idol ကို သဲသဲလှုပ်ချစ်တဲ့ မမရယ် မမကိုမှစိတ်ဝင်စားမိသွားတဲ့ အချေစိန်ကိုကို ရယ် တို့ကြားမှာ.. ဘယ်လိုဘယ်လိုတွေများဖြစ်လာမလဲ ?
Last air date2019-05-30
Home PageHer Private Life (2019) Complete